एनसेलको १० करोडको पुँजी २० अर्ब रुपैया मुनाफा | Nepali Movie, New Nepali Song, Nepali Video, Nepali News, Lok Dohori, Nepal Result, Live TV, Live FM
एनसेलको १० करोडको पुँजी २० अर्ब रुपैया मुनाफा
00SANJAN Friday, April 3, 2015
एलसेलले विदेश लैजान खोजेको नाफा उद्योग विभागले रोक्यो । लगानीको तुलनामा अत्याधिक नाफा आर्जन गरेको मन्त्रालयको शंका । १० करोड रुपैयाँ पुँ...
एलसेलले विदेश लैजान खोजेको नाफा उद्योग विभागले रोक्यो । लगानीको तुलनामा अत्याधिक नाफा आर्जन गरेको मन्त्रालयको शंका । १० करोड रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीले एकै आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैया मुनाफ आर्जन गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको हो ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्डस होल्डिङ्सले लाभांशबापत लान खोजेको रकम उद्योग विभागले रोकेको छ । वेस्ट इन्डिजको रेनोल्डस होल्डिङ्सका नाममा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लैजान एनसेलले ४ महिनाअघि आवेदन दिए पनि प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै विभागले रोकिदिएको हो । 'औद्याेगिक व्यवसाय ऐन २०४९ अनुसारका धेरै प्रक्रिया पूरा नगरेपछि लाभांश लैजाने प्रक्रिया रोकिएको हो,' विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने, 'कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै लभांश लैजाने काम अघि बढ्छ ।' एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विदेशी साझेदार होल्डिङ्सले लैजान खोजेको रकममा रोक लगाइएको हो । यो आर्थिक वर्ष ऐनसेलले २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार सेयर पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । कम्पनीले एकै आर्थिक वर्षमा सेयर पुँजीभन्दा २ सय गुणाभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको छ । लाभांश भने पुँजीको १ सय १० गुणा बढी वितरण गरेको देखिन्छ । लाभांश वितरणपछि पनि कम्पनीको सञ्चित मुनाफा १९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ । विभागले स्वीकृत लगानी र वासलातमा भएको लगानीबीचको फरकलाई देखाउँदै रकम लैजान रोक लगाएको हो । उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीको वासलात र स्वीकृत लगानीका बीच १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको फरक देखिएको छ । कम्पनीले १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिएको छ । तर २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको स्रोतको दाबी छ । 'स्वीकृति नगराई १० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइयो ?' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'नियामक निकायलाई किन जानकारी दिइएन ?' उद्योग वा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी -एफडीआई) भएको कम्पनीले अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागसँग पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था पालना नभएको कारण देखाउँदै विभागले लाभांश लैजान रोकेको हो । त्यसबारे विभागले पहिलोपटक पुस ११ गते एनसेललाई पत्र लेख्दै कारण खोजेको थियो । लामो समयसम्म जवाफ नआएपछि पुनः माघ ८ गते अर्को पत्र काटदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । कारण सोध्न विभागको निर्देशकस्तरीय बैठकले निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । एनसेलले त्यसको जवाफ नदिई चैत ५ गते फरक देखिन आएको रकम बजारको लगानी (पुँजी) वृद्धिको अनुमति मागेको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ सम्मको लाभांशअन्तर्गत रकम १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ यसअघि लगिसकेको छ । नाफा लैजान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस पनि एनसेलले लिइसकेको छ । एक करोडभन्दा बढी ग्राहक भएको एनसेलको वेबसाइटमा विदेशी साझेदारका रूपमा स्विडेन र फिनल्यान्डको टेलियासोनारा कम्पनी भए पनि लाभांश पाउनुपर्ने कम्पनीमा रेनोल्डस होल्डिङ्स वेस्ट इन्डिज छ । लाभांश लैजान एनसेलले दिएको आवदेनअनुसार कम्पनीमा होल्डिङ्स र निरज गोविन्द श्रेष्ठ दुई साझेदार मात्रै लगानीकर्ताका रूपमा देखिन्छन् । श्रेष्ठ गैरआवासीय नेपाली हुन् । उनको भागमा पर्ने २० प्रतिशत लाभांश भने वितरण भइसकेको स्रोतको दाबी छ । उक्त लाभांश वितरण गर्ने निर्णय एनसेलले ०६९ मा गरेको हो । टेलियासोनाराको वेबसाइटका अनुसार रेनोल्डस र टेलियासोनाराको पनि सम्बन्ध देखिन्छ । तर टेलियासोनारा एनसेलको लगानीकर्ता भएको पुस्ट्याइँ सरकारी निकाय र स्वयं कम्पनीको कागजातले भने गर्दैन । कम्पनी स्रोतका अनुसार टेलियासोनाराले रेनहोल्डको कम्पनी नै खरिद गरिसकेकाले यस्तो हुन गएको हो । यो लाभांश लैजान पाउने/नपाउने भन्ने निर्णय उद्योग प्रवर्द्धन बोर्डले गर्नेछ । ठूलो रकम भएकाले बोर्ड बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डका अध्यक्ष उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरे उक्त विषयमा छलफल नहुने बताए । 'प्रक्रिया पुर्‍याएको छैन भन्ने सुनेको छु,' उनले भने, 'ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी बोर्डको एजेन्डा बन्ने छैन ।' यसबाहेक एनसेलमा लगानीकर्ताले गरेको सेयर लगानी (ईक्युटी) को तुलनामा अत्यधिक नाफा आर्जन गरेको विषयलाई पनि मन्त्रालयले शंकाको घेरामा राखेको छ । एनसेलका कार्पोरेट कम्युनिकेसन एक्सपर्ट मिलनमणि शर्माले लाभांश वितरण प्रक्रियामै रहेको बताए । 'दुई वर्षअघिबाट प्रक्रिया थालिएको हो । राष्ट्र बैंकमा पनि अनुमति माग गरेका छौं,' उनले भने, 'सरकारका निकायहरूसँग केही नीतिगत प्रक्रिया पूरा गर्ने चरणमा छौं ।' विभागले भनेझैं फरक देखिन आएको रकम स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले बताए ।
Incoming Search Terms: Ncell Profit, Ncell Profit Hold,
Ncell News Slider
Nepali Movie, New Nepali Song, Nepali Video, Nepali News, Lok Dohori, Nepal Result, Live TV, Live FM: एनसेलको १० करोडको पुँजी २० अर्ब रुपैया मुनाफा